Waa kuma ninkii toogashada ka geystay Texas? - BBC News Somali
Waa kuma ninkii toogashada ka geystay Texas?
20 Maajo 2018
Lahaanshaha sawirka GALVESTON COUNTY JAIL/TWITTER
Image caption Dimitrios Pagourtzis
Waxa uu ka tirsanaa koox kaniisadda u qaabilsan qoob ka cayaarka, waxa uu sidoo kale ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee iskuulkiisa. Waxa uu ahaa arday aad ugu wanaagsan waxbarashada hadana waxa uu rasaas ku furay ardaydii ay isku fasal ahaayeen, halkaasi oo uu ku dilay 10 qof.
17-jirkan ayaa wajahi doono xukun dil, isagoo maalintii jimcihii dil ka geystay iskuulka sare ee Santa ee gobolka Texas.
Gabalnatooraha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in sawir laga shakisanyahay oo haatan laga bixiyay barta Facebook ayaa muujinayay Funaanad ay ku qorantahay "waxaa lay dhalay in aan wax dilo" waana calaamadda kaliya ee digniinta.
Si kastaba sacaada ka hor inta uusan dilka geysan ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay war bixin aan caadi ahayn, sidaasi waxaa warbaahinta CBS usheegay wasaaradda cadaaladda.
Lahaanshaha sawirka DIMITRIOS PAGOURTZIS/FACEBOOK
Arday lagu magacaabo Dustin Severin ayaa telefishanka KPRC in uu arkay willka dhalinyarada ah ee dilka geeystay oo ku jiro mid ka mid ah qolalka iskuulka inta uusan weerarka dhicin waxa uu yiri waxa uu u labisnaa si ka duwan ardayda oo waxa uu xirnaa kabo buud ah oo madaw iyo jaakad.
Mid ka mid ah macalimiintiisa ayaa wargeyska New York Times u sheegay in uu aamusnaa balse aamusnaantiisa ma ahayn mid dadka cabsi galineysay.
Trump oo FBI-da Mareykanka ku dhaliilay toogashadii Florida
Toogasho ka dhacday iskool ku yaalla Florida oo carruur lagu laayay
Qoyska wiil toogasho ka geystay Texas oo warbaahinta la hadlay
Booliska yaa sheegay in ninkan dhalinyarada ah uu qorshihiisii ku aadana weerarka uu iskuulka ka geystay uu qoraal ahaan ugu diyaariyay computer-kiisa iyo telefoonka gacanta.
Maamulka iskuulka ayaa sheegaya in uu ka mid ahaa ardayda dhibcaha fiican keenay oo la gudoon siiyay shahaada sharaf.